Ukwenza ezemidlalo | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
luhlobo luni lwamagqabantshintshi
zeziphi iindidi ezikwiQonga lomdlalo wamanqindi Imbaleki ebingumdlalo wamanqindi engaphantsi kweenyanga ezintathu ayivumelekanga ukuba ithathe inxaxheba kulo naluphi na ukhuphiswano. Udidi lwe-3. Kuyimfuneko ukuphumelela imilo emi-3 phakathi konyaka nabaqalayo kukhuphiswano ...
Apho e-Chelyabinsk kukho i-gym ebiza imali, i-aerobics, impilo, + izaphulelo zabafundi
Apho eChelyabinsk kukho umthambo ongabizi mali ingako, i-aerobics, ukomelela komzimba, + izaphulelo zabafundi Fitness kunye nomdaniso studio "Rai" Ndonwabile ukumema kumdaniso omtsha kunye nesitudiyo somzimba iRai, esandula ukuvulwa ...
Indlela yokulinganisa i-biceps? kwindawo ekhululekile? Ndifuna ukulandelela ukukhula kwamanqana.
zilinganiswa njani ii-biceps? kwimeko ekhululekile? Ndifuna ukulandelela ukukhula kweetoti. eyona nto ibalulekileyo kukuhlala ukwimeko efanayo. Amaninzi, oku kwenziwa kwimeko ekhululekile. Kodwa ngenxa yesiphumo ...
indlela yokusetha kwakhona i-2 kg ngosuku lwe-1. Ngoku ndifuna ukutya oko unokutya? Okwangoku ndiya kuqhuba imizuzu ye-20
ulahlekelwa njani yi-2 kg ngosuku olu-1. ngoku ndifuna ukutya ungatya ntoni? Ndiza kuqhuba malunga nemizuzu engama-20 yedayeti ukunceda))) ndivuke Amanzi asuswa emzimbeni ngokukhawuleza. Hayi…
Ngaba i-expander iyakunceda ukupompoza i-forearms okanye ingqina?
Ngaba i-expander iyanceda ukumpompa iingalo zangaphambili okanye yintsomi? Ndinengxaki efanayo ithambo licekeceke kakhulu andazi nokuba ndithathe isandisa okanye hayi ?! Isandla asinakupompa, kodwa ngokucacileyo sibi ...
Yintoni kunye nendlela yokuhlamba i-ski jacket ??
Uyihlamba njani ibhatyi yeski? Ewe awudingi kuhlamba ibhatyi yakho kumatshini wokuhlamba impahla.
Ingaba i-500 umgama wecala? okanye kuphela ku-400?
Ngaba yi-500 yeemitha ibaleka? okanye ukuya kuthi ga kuma-400? I-Sprint iseti yoqeqesho lweembaleki, apho iimbaleki zikhuphisana ngokubaleka (ukubaleka ngesantya) kwibala liphela. Ubude bomgama ...
Indlela yokufunda ukutsala intombazana?
Ufunda njani ukutsala intombazana? 1.Umqolo webhloko ephezulu usiya esifubeni nasemva kwentloko iiseti ezi-3 ze-12 reps, endaweni enye emva kweentsuku eziyi-3-4, ukuba kukho umthambo okhethekileyo kwindawo yokuzivocavoca ...
Imiphumo emibi yokudala!
Iziphumo ebezingalindelekanga zomdali! Wonke umntu unendlela eyahlukileyo-le yindlela umzimba ophendula ngayo kwiimpazamo ezenziwa ngumntu ukuba azenzakalise! Ngethamsanqa!)))) Ngamanye amaxesha iicramps, urhudo ... ubunzima, amandla, unyamezelo))) khange bazibone iziphumo ebezingalindelekanga ...
Yintoni i-glutamine kwaye kutheni idliwe?
Yintoni i-glutamine kwaye kutheni ityiwa? I-Glutamine yi-amino acid ebalulekileyo efumaneka kwiprotein kwaye iyimfuneko ekukhuleni kwemisipha ngokufanelekileyo kunye nenkxaso yamajoni omzimba. Ngamafutshane, batya ukuze ...
Ngaba yinyani ukuba abadlali bafumana intliziyo ekhulayo kunye ne-pulp ngenxa yeli phu
Ngaba kuyinyani ukuba iimbaleki zinentliziyo eyandisiweyo kwaye ukubetha kwentliziyo yazo kuhamba kancinci kwimeko ezolileyo ngenxa yoku? Ewe, iimbaleki ezinobungcali zinokonyuka kubungakanani bentliziyo kunye ne-tachycardia, oku ...
Ukufa kunye nokufa kweyona nto yinto enye, ukuba yintoni, umehluko!
Ukufa kunye nokuphakanyiswa kwezinto ezifanayo kuyafana ukuba akunjalo ke yintoni umahluko! Zimbini iintlobo eziphambili zokutsala: sumo yakudala. I-classic deadlift yenziwa ngemilenze emincinci emiselweyo (ngoku ...
Ukususa isisu, iziphi iimimulsi kufuneka ziyenze?
Yintoni yokususa isisu, apho kufuneka uqeqeshe khona ii-simulators? Isisu sahlukile: Udonga lwesisu esibuthathaka - emva koko isisu siqala kwi-sternum. Indlela elula yokujongana nayo ungqimba lwamafutha (kunokwenzeka nokuba izihlunu ...
Indlela yokupompa i-press ukuya kudayisi yeenyanga ze-1? Umntu
Uyakha njani i-abs kwinyanga enye? Yindoda, jonga nantsi indawo elungileyo apho yonke into icace gca kwaye icaciswe gca http://www.greathome.tk/. Mna ngokwam ndikwinkqubo efanayo ...
Indlela "yokoma" ngokuchanekileyo kwimibuzo yeembaleki
Ungawomisa njani umbuzo weembaleki Enye yeempazamo ezixhaphakileyo kubakhi bomzimba abaninzi ngokukhawuleza okanye ukunciphisa kakhulu ikhalori ekutyeni. Enye impazamo kukutya kakhulu ngaphambi kokuba ...
Unokukhuphela njani umshicileli? I-Technique, ukuphefumula, njl
Ukupompa umatshini wokushicilela ngokuchanekileyo? Itekhnoloji, ukuphefumla, njl. Ukuphakamisa umzimba ngomphunga, ukunciphisa ukuphefumla. Kufuneka uphefumle ngokulinganayo. Kungcono ukwenza oku, phakamisa umzimba ngaphambi kokuba amagxa egxalaba aqale ukunyuka ...
Indlela yokucoca ityhini yebhayisiki?
Ungawuthambisa njani umsonto weebhayisikile? kufuneka igrafayithi. kodwa malunga nokungcola kunye nezinye izinto ezinamathelayo, kwaye ke kufanele ukuba ibe lilaphu. inokwenziwa ngendlela yeSoviet. susa ikhonkco kwaye ulicwilise kuwo nawuphi na umatshini ...
Yintoni eyenza izikwere?
Ngaba kunika ntoni squat? +5 ekuphenduleni, kulwakhiwo + lwama-squats angama-20 aphucula izihlunu ze-g * py. hayi zingaphi i squats, zingaphi imithambo kwi esile (kulungile, squats mhlawumbi nazo ziyashukumisa iimpundu) ngu ...
Ingaba i-ironman iprotheni efanelekileyo? whey
Ngaba iprotein yentsimbi ilungile? whey Iprotein esemagqabini. Ndivumelana noNikita, iiproteni ezininzi ziyasijija isisu sam, kodwa loo nto indenze ndaphila! Ngapha koko, uku ...
Indlela yokwenza iipendle
Uyenza njani i-crunches Technique 1. Lala phantsi uze uguqe ngamadolo kwii-engile ezilungileyo. Iinyawo ziphumle phantsi. Beka izandla zakho ngasemva kwentloko yakho kwaye 2. Gxila kwiliso. 3. Yenza ...
Imibuzo ye-59 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,789.